Index Ndenye Mgbawa: A Ngwa ngwa, Mma EMV Ahụmahụ | Martech Zone
N’ehihie a, m gara ileta nwa m nwanyị n’ọfịs ya (kedu ka nna m si ajụ oyi?). M kwụsịrị n'ụlọ ahịa ahụ n'okporo ámá ahụ, Ọhụrụ ahụ ma were ndokwa ifuru mara mma maka oche ya na ụfọdụ ọgwụgwọ maka ndị ọrụ ebe ahụ. Mgbe m lere, m blown pụọ… Etinye m Kaadị kaadị EMV ọ rụkwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ahụ.
Ọ bụ kachasị ọsọ m hụtụrụla ebe ndenye ọpụpụ na kaadị nwere mgbawa. Ọbụghị naanị nke ahụ, ka m mechara ego m kwụrụ, ọ jụrụ m ma achọrọ m nnata akwụkwọ ego ka m zigara ya na adreesị email m. Obere oge ka e mesịrị, enwetara m akwụkwọ azụmahịa m na coupon m ga-eji leta m ọzọ. Enweghị mkpa ibipụta dere, a na-etinye ya na akpaghị aka ma ọ bụrụhaala na m na-eji otu kaadị akwụmụgwọ. Ọganihu!
N'ịchọ ịmata ihe banyere usoro ahụ, m lere anya Index - ikpo okwu na-eme ndenye ọpụpụ. Ọ na-efesa na e nwere ihe dị iche na teknụzụ ha. Ha degharịrị sọftụwia na - arụ ọrụ maka ị nweta ma kwado data data EMV. Usoro ha nwere ikike ịtinye ma were kaadị gị n'oge ndenye ọpụpụ - wee kwado ire ere ahụ ozugbo ị dị njikere ịga.
Nke a bụ nkọwa nke otu esi Ndepụta Index mepụtara Ndenye Mgbawa, ebe ha nwere ike ịnweta usoro ndenye ọpụpụ ruo 1 sekọnd! Nke ahụ dị okpukpu iri karịa nkezi, na-eme ka ndenye ọpụpụ na ahụmịhe onye ọrụ.
Oh… na The Fresh Market bụ mma dị ka nke ọma!
Tags: LeleeEmvindexebe ire erenaangwa ngwa mgbawa